Xiddiga reer France Karim Benzema ayaa ka badbaadiyey kooxdiisa guul daro ciyaartii derby-ga… – Hagaag.com
Xiddiga reer France ee Karim Benzema ayaa ka badbaadiyay kooxdiisa Real Madrid guuldaro ka soo gaari laheyd ciyaartii Derby-ga caasimada Spain, ka dib markii uu ku hogaamiyay kooxda boqortooyada barbaro loo baahnaa oo ay la galeen kooxda Atletico Madrid maanlintii Axada, kulan ka tirsanaa wareega 26-aad ee Horyaalka.
Barbaraha ayaa ka hor istaagay Atlético inay iska wadato guulaheeda, waxay heysataa 59 dhibcood, kaliya 3 dhibcood ayay ka horeysa kooxda ugu dhow ee Barcelona, ​​oo ah kooxda ugu weyn ee ka faa’iideysatay natiijadaas, iyadoo og in Atletico ay weli heysato ciyaar dib loo dhigay, halka Real Madrid ay ku jirto kaalinta seddexaad iyadoo leh 54 dhibcood.
Atletico ayaa shabaqa u soo taabtay xiddiga reer Uruguay ee Luis Suarez daqiiqadii 15-aad si uu kor ugu qaado goolashiisa tartanka kana dhigo 17 gool oo ku jira kaalinta 2-aad ee kala saraynta gooldhalinta tartanka, laba gool ayuu ka dambeeya xiddiga reer Argentine Lionel Messi, kabtanka Barcelona. Taasi oo shiday tartan loogu jiro hanashada gooldhalinta isaga iyo saaxiibkiis hore ee Blaugrana.
Inkastoo qof walba uu isku diyaariyay dhamaadka ciyaarta ee guusha Atletico, Benzema ayaa dhaliyay goolka barbaraha qaaliga ah ee Real daqiiqadii 88aad.
Barbarahan ayaa wuxuu huriyay tartanka loogu jiro hogaanka horyaalka Spain.